You are here: Home Home Aragtidii Hoggaamiye Cigaal ee Qalalaasaha Soomaaliya iyo mowduucyo kale oo xiiso leh
Maansadii, Adaa noo Duq ahaa ee Timacadde, 1968kii, Hargeysa,
12 sannadood ayaa ka soo wareegtay markii la soo gebagebeeyay aaskii, baroor-diiqdii iyo tacsidii Hoggaamiyihii, Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo 3/5/2002dii ku geeriyooday cisbitaal ku yaal magaalada Pretoria ee dalka South Africa. Marxuum Cigaal 6/5/2002dii ayaa si aad u sarreysa oo heer Qaran ah loogu aasay magaalada Berbera iyada oo la raacayo dardaarankiisii ahaa in aabbihii oo Berbera ku aasan, xabaashiisana laga ag qodo oo isagana lagu duugo. Naxariistii Janno Alla ha siiyo, innagana dhammaanteen samir iyo iimaan ha inaga siiyo. Dhammaanteen marka aan leeyahay waxa aan uga jeedaa gaar ahaan Somaliland, guud ahaanna dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Waayo? Cigaal ma ahayn oo keliya hoggaamiyaha Somaliland bal se sida ka muuqatay tacsidiisii iyo baroor-diiqdiiba wuxu ahaa hoggaamiye Soomaaliyeed, halyey Geeskan Afrika u dhashay, hoggaamiye qaaraddan Afrikan ka dhashay. Geeridii Cigaal iyada oo naxdinteeda lahayd, haddana waxaanu shaki ku jirin in ay milge iyo maamuus aan hore loo ogeyn u yeelatay Cigaal iyo shacbiga Somalilandba. Gude iyo dibadba waxa ka curtay dareen ididiilo leh oo dadkii isu soo dhaweeyay.
Waxa aan jeclahay maqaalkan in aan si sar-ka-xaadis ah wax uga taataabto aragtidii Cigaal ee ku wajahnayd Qalalaasha Soomaaliya iyo mowduucyo kale oo aad xiisayn kartaanba. Maqaalkan waxa aan baroor-diiq, xus iyo maamuusba uga dhigayaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo suulkiisii iyo saxeexiisiiba kaga tegay saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliyeed, Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda Afrika.
Waxa kale oo aan si kooban oo guud-mar ah u dul cararai doonaa aragtiyihii kala duwanaa ee Hooggaamiye Cigaal ka lahaa qaybo badan oo saameeya wejiyada badan ee waayaha Soomaaliyeed iyo Somalilandba.